Android လုလင်: February 2013
Screen Speaker Live Wallpaper 9.16 MB
ကဲ ကိုယ်ဖုန်းရဲ့ screen ပေါ်မှာ speaker ပုံလေးတင်ပြီး သီချင်းဖွင့်ထားရင် တုန်ခါနေတာ
လန်းချင်ရင် ဒီ Live Wallpaperသာ သုံးလိုက် :)
မှာလေ့လာပြီး ကြိုက်ရင် အောက်ကလိပ်စာမှာရယူနိုင်ပါတယ်
ရေးတဲ့အချိန် 10:40 PM No comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
မော်ဒယ်နိမ့်သော Andriod ဖုန်းအတွက် Gtalk Voice and Video Call
သူငယ်ချင်းများကိုနည်းတခုပြောပြချင်ပါတယ် အခုကျနော်တို့ ဖုန်းတွင်အများဆုံး
သုံးနေကြတဲ့Gtalk ဆိုတာပါပဲ..။မော်ဒယ်နိမ့်သောဖုန်းတွေမှာ Gtalkကို
ရိုးရိုးချက်တင်လောက်ပဲရကြပါတယ် ။call ချင်ရင်တော့ Vtalk တို့
Nimbuzz တို့ဖုန်းထဲinstallရပါတယ်။Vtalk က Voice and Video call ရပေမဲ့ချက်တင်နဲ့တခါတည်းတွဲသုံးမရတဲ့အတွက် နဲနဲရှုပ်ရပါတယ်..။
ဖုန်းကို rest setting လုပ်ရင်လည်းအဲကောင်တွေကပြုတ်ထွက်ပြီး
မပြောက်ထွက်တော့ဘူး...။sumsang ဖုန်း S2 ၀ယ်ရင် အပြီးပါလာတဲ့ Talk ပုံစံမျိုးပါ..။ကဲကျနော်တို့မော်ဒယ်နိမ့်တဲ့ galaxy W/Y/ACE/ACE Plus
အရင်ဆုံးမိမိဖုန်းကို root လုပ်ရပါမည်...။root နည်းကဖုန်းတလုံးနှင့်
မလုပ်တတ်ရင် aung575@gmail.com နဲ့ zawmintan@gmail.com ကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်.....။ကျနော်ကတော့ ကျနော်root ဖူးတဲ့ဖုန်းလောက်ဆို ကောင်းကောင်းရှင်းပြနိုင်ပါတယ်....။
ကဆော့ဝဲ ၃ ခုကိုဒေါင်းရအောင်.....။
အရင်ဆုံးမျှားပြထားတဲ့အတိုင်း system ကိုသွား...။မ၀င်ခင်အပေါ်က
Mount R/W ကို နှိပ်လိုက်ပါ R/O ဖြစ်သွားပါမယ်...။
system/app/ကိုဝင်ပြီးမျှားပြထားတဲ့ Talk.apk/Talk.cdex ကို delete လိုက်ပါ...။
ပြီးရင် ခုနကဒေါင်းထားတဲ့ Talk2.apk ကို system/app/ ထဲဝင်ပြီး paste ချပါ.။
အပေါ်ကပုံလိုတွေ့မှာပါ...။ နောက်ဆုံးအဆင့်ကတော့ ခုနကဒေါင်းထားတဲ့
libtalk _ini.so ကို systam/lib/ကိုဝင်ပြီး paste ချလိုက်ပါ..။
နောက်ဆုံးအဆင့်ကတော့ ခုနကဒေါင်းထားတဲ့ libtalk _ini.so ကို
systam/lib/ကိုဝင်ပြီး paste ချလိုက်ပါ..။ပြီးရင်ဖုန်းကို restart ချလိုက်ပါ....။ကဲ...မျိုးကြီးသီချင်းလေးအော်ဆိုပေတော့.....။
ဖုန်းပြန်ပွင့်လာရင် မိမိGtalkဟာ အပေါ်ဆုံးမှာပြထားတဲ့ပုံလို ဖြစ်သွားပါပြီ...။
နီးစပ်ရာသို့အကောင့်ကိုခေါ်စမ်းကြည့်ပါ..Voice ရော Video call ပါရပြီ။.
ရေးတဲ့အချိန် 10:37 PM No comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
Free Call & Free MMS Apk
သူကတော့ ၀ိုင်ဖိုင် (သို့) 3G အင်တာနက်အသုံပြုပြီး နှစ်ဖက်စလုံမှထည့်ထား ပြီးတော့
ဖုန်းအလားကားပြောလို့ရတဲ့ ဆောစ့်ဝဲလ်လေးပါ အသုံးပြုမယ်ဆို အကောင့်ဖွင့်ဖို့တော့လိုပါတယ်
ရေးတဲ့အချိန် 10:33 PM No comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
phone အတွက် Gtalk လေးပါ
ရေးတဲ့အချိန် 9:39 PM 1 comment: ရေးသားသူ Android လုလင်
မေ့တတ်သူများအတွက် Stick 'N' Find bluetooth စတစ်ကာလေးများ
သတိမေ့တတ်သူများအတွက် အသုံးဝင်နိုင်မယ့် mobile gadget တစ်ခုပါ။ မိမိသုံးနေကြ ဖုန်းကို တစ်နေရာရာတွင် ချခဲ့ပြီး၊ နောက်တစ်ခါ ပြန်အသုံးပြုချင်လျှင် ထားခဲ့သောနေရာကို မမှတ်မိတော့ ပါက အခြားဖုန်းတစ်လုံးလုံးနှင့် ခေါ်ဆိုကြည့်လျှင် ဖုန်း Ring သံကို နားထောင်ပြီး၊ ပြန်လည်ရှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။ အလားတူ အရေးကြီးသော့တွဲများ၊ တီဗွီရီမုများ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန် ကလေးများ ပျောက်ဆုံးပါက အထက်ပါအတိုင်း ခေါ်ဆို၍ မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး။ ဆယ်ပြားစေ့အရွယ်သာရှိပြီး၊ bluetooth 4.0 system အသုံးပြုထားတဲ့ Stick 'N' Find စတေကာလေးများကို အထက်ပါ ပစ္စည်းများမှာ ကပ်ပေးလိုက်ပြီး၊ မိမိအသုံးပြုနေကျ ဖုန်းမှတစ်ဆင့် ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။
အသုံးပြုဖို့ကတော့ Stick 'N' Find sticker ကို ရှာဖွေလိုသော ပစ္စည်းများပေါ်မှာ ကပ်ပေးထားပြီး၊ iPhone 4s, iPhone 5, New Ipad, iPad mini, New iPod touch နဲ့ Android 4.1 system သုံး device တစ်ခုခုမှာ Stick 'N' Find Application ကို install လုပ်ပေးထားရပါမယ်။ ပြီးလျှင် sticker နာမည် များကို configure လုပ်ပေးထားပြီး၊ ရှာဖွေလိုသော အချိန်မှာ Stick 'N' Find application ကိုဖွင့်ခါ ပေ ၁၀၀ အတွင်း ရှာဖွေပေးနိုင်ပါတယ်။ လဲလှယ်ပေးနိုင်တဲ့ CR2016 ဘက်ထရီ ပါဝင်ပြီး၊ သက်တမ်းကတော့ တစ်ရက်ကို ၃၀ မိနစ်အသုံးပြုပါက တစ်နှစ်ခံမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ လောလောဆယ် အားနဲချက်ကတော့ sticker ရဲ့ တည်နေရာ အရပ်မျက်နှာနှင့် အကွာ အဝေး ကိုအတိအကျ ဖေါ်ပြပေးနိုင်ခြင်းမရှိသေးပဲ၊ application radar မှာ sticker တစ်ခုပေါ်လာသည်နှင့် ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ်လုပ်ခါ ချဉ်းကပ်ရှာဖွေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အသေးစိတ်ကို http://www.sticknfind.com/ မှာ သွားရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
ရေးတဲ့အချိန် 9:36 PM No comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
Contactတွေကို Widget အဖြစ်ထုတ်ထားပေးနိုင်တဲ့ App ပါ
ကိုယ်favorite ဖြစ်တဲ့ Contactတွေကို Widget အဖြစ်ထုတ်ထားပေးနိုင်တဲ့ App ပါ
မှာလေ့လာပြီး အသုံးပြုမယ်ဆို အောက်ကလိပ်စာမှရယူနိုင်ပါတယ်
ရေးတဲ့အချိန် 9:35 PM No comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
ခုနောက်ပိုင်း samsung အမြင့်ဖုန်းတွေမှာပါတဲ့ multiwindow ပုံစံ apk လေးပါ။ apk မထွက်ခင်တုန်းကတော့ recovery ကနေ zip ဖိုင်လေးနဲ့ ထည့်ရတော့ နည်းနည်းတော့ခက်တာပေါ့ ခု apk လေးထွက်လာတော့ သုံးရတာလည်း အဆင်ပြေ စက်ထဲထည့်ရတာလည်း အဆင်ပြေပြေလေးနဲ့ error ကင်းကင်းလေး အသုံးပြုလို့ရသွားပါပြီ။ တစ်ခုခုသုံးချင်ရင် ဘေးလေးကိုဆွဲလုက်ရုံပါပဲ အဆင်သင့်ယူသုံးရုံပါပဲ အသုံးပြုရအဆင်ပြေပါတယ် သူငယ်ချင်းများအားလုံးအတွက် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ရေးတဲ့အချိန် 9:16 PM No comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
နောက်ခံ run နေတဲ့အသံတွေ ဖမ်းလို့ရတဲ့ All That Recorder.apk
လုလင်ပျိုက 112 ကိုခေါ်ရင်လာတဲ့
ရဲစခန်းအတွက် 199 မီးသတ်အတွက် 191 နဲ့လူနာတင်ယာဉ်အတွက် 192 သို့ခေါ်ဆိုနိုင်ပါတယ်ရှင် ကိုအသံဖမ်းချင်တာ
call recorder က အဲဒိဟာကို မဖမ်းပေးဘူး။တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် နက်ဝေါ့ချိတ်မိမှ call recorder ကအသံဖမ်းပေးတာဆိုတော့ အဆင်မပြေဘူး။
အဲဒါနဲ့ရှာလိုက်တာ ဒီကောင်လေးနဲ့ အဆင်ပြေသွားတယ်။
ဒီ All That Recorder ကိုဖွင့်ပြီးအသံဖမ်းခိုင်းလိုက်။ပြီးရင် ဘတ်ဆုတ် လိုက်ပြီး 112 ကိုခေါ်ပြီး အသံဖမ်းကြည့်ပေါ့။
ပြောချင်တာ နောက်ခံ run နေတဲ့ အသံကို ဖမ်းနိုင်တာ ကိုပြောချင်တာပါ။
လိုချင်ရင်တော့ ဒီနေရာမှာဒေါင်းလိုက် နော်
ရေးတဲ့အချိန် 7:14 PM 1 comment: ရေးသားသူ Android လုလင်
CyanogenMod 10.1 MMS App on Android 4.1
ဟဲလာပြန်ပြီဗျား အသစ်ထွက်တာလေးတွေကိုတင်ပေးလိုက်မယ် အချိန်ရှိတုန်း
ဖုန်းတွေကိုဖလန်းဖလန်း ဖြစ်သွားစေမဲ့ Quick Reply & Emoji လေးပါနော် ....
ဖုန်းတွေမှာ ဆက်သွယ်သူတွေကို အရုပ်ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ ထည့်ပေးလိုက်လို့ရတယ်နော်
massage တွေနဲ့ internet သုံးစွဲတဲ့သူတွေအတွက်တော်တော်လေးအသုံးဝင်စေမယ်နော်
မယုံရင်စမ်းသပ်ကြည့်လိုက်ပါ ဖလန်းဖလန်း ဖြစ်သွားစေရမယ် ....... google play ကနေ
ဒါရိုက် installer လုပ်လို့လဲရပါတယ်နော် ....... Root Explorer လုပ်ပေးဖို့တော့လိုတယ်နော် .....
ဒီကောင်ကို အောက်မှာယူလိုက်ပါနော် ....
Root Explorer >>> CyanogenMod 10.1 MMS App (Root Explorer File Manager)
Root Explorer >>> CyanogenMod 10.1 MMS App (Root Browser Lite)
Download >>> CyanogenMod 10.1 MMS App on Android
ရေးတဲ့အချိန် 6:35 PM No comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
သင့်ဖုန်းကို SPY CAMERA အဖြစ်ပြောင်းပေးမယ့် Hidden Camera Premium
Mobile Hidden Camera Latest version:3.4.201-9 Requirement:1.0 and up Size:973 KB
Download Mobile Hidden Camera 3.4.201-9
ရေးတဲ့အချိန် 6:22 PM No comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
PK!Sexy Girl Game လေးပါ
ယောကျာ်းလေးများအကြိုက်တွေ့မယ့် Game လေးပါ
တစ်ခုကောင်းတာက Game က Video လေးဖြစ်ပါတယ်
အသဲလေး ၅ခုကိုရအောင်ယူလိုက်ပါ တစ်ခုရရင် တစ်ခါကပြမှာဖြစ်ပါတယ်
ရေးတဲ့အချိန် 4:09 PM No comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
Andriod ဖုန်းများကို computer မှ လုံးဝ ထိန်းချုပ်နိုင်ရန်
ကိုယ့် Andriod ဖုန်းကို ကိုယ့် Computer PC ပေါ်ကနေ အပြည့်အ၀ ထိန်းချုပ်ပေးနိုင်မယ့် Wondershare MobileGo for Andriod လေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်..
အရင်ဆုံး အောက်မှာ download အရင် ဆွဲလိုက်ပါ.. password ကတော့ aunghtunoo ပဲဖြစ်ပါတယ်..
ရလာတဲ့ file ကို computer ထဲမှာ install လုပ်ပေးလိုက်ပါ..
ဒီ software လေးအသုံးပြုဖို့အတွက် မိမိဖုန်းရဲ့ Driver ကို Computer ထဲ သွင်းထားဖို့တော့ လိုပါလိမ့်မယ်..
ပြီးရင် မိမိဖုန်းထဲက.. Setting > Application > Development> USB debugging ကို tick လုပ်ထားပေးပါ..
ဒီ Softwares လေးမှာ အပိုင်း ၆ ပိုင်းပါဝင်ပါတယ်… Musics, Videos, Photos, Contacts, SMS နဲ့ App တို့ဖြစ်ပါတယ်…၊ အပိုင်း ၁ ခုချင်းစီမှာ function မျိုးစုံပါဝင်ပြီး အသစ်ထည့်သွင်းတာနဲ့..၊ အဟောင်းတွေကို ပြန်ပြင်တာ..၊ ဖျက်သိမ်းတာတွေကို လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်..၊
Musics, Videos… တွေကို Add လုပ်မယ်ဆိုပါက ၄င်း Wondershar MobileGo software လေးက ကိုယ့်ဖုန်းမှာ Play လို့ရမယ့် System လေးတွေကို auto ပြောင်းပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်.ဥပမာ Musics ဆိုရင် mp3 format နဲ့ videos ဆိုရင် mp4 format တို့ကို auto ပြောင်းပေးပါလိမ့်ယ်….(ပြောင်းပြီးသား ဆိုရင်တော့ ဒီတိုင်းပဲ add ပေးပါတယ်..)
Contacts နဲ့ SMS တွေကိုလည်း computer ပေါ်မှာ ပြင်ဆင်နိုင်မှာဖြစ်ပြီး…. အထူးခြားဆုံးကတော့… App ဆိုတဲ့ အပိုင်းမှာ application file တွေဖြစ်တဲ့ (.apk) file add လိုက်တာနဲ့ ဖုန်းထဲမှာ တစ်ခါတည်း install လုပ်ပေးမှာ ဖြစ်တာကြောင့် ဖုန်းထဲမှာ သက်သက် ပြန်ပြီး install လုပ်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့…
ဒါဆိုရင် သင့်ဖုန်းနဲ့Computer နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီး လုံးဝ control လုပ်လို့ရပါပြီ… ဖုန်းကို backup လုပ်တာ၊ Snapshot ရိုက်တာတို့ကိုလည်း ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်… … USB ကြိုးမပါပဲ WiFi နဲ့ ချိတ်ပြီးတော့လည်း ဖုန်းနဲ့ computer ကို ချိတ်ဆက် နည်းတွေကိုလည်း စမ်းသပ်နိုင်ပါတယ်..
အဆင်မပြေတာများ ရှိခဲ့ရင် comments ရေးခဲ့ပေးကြပါနော်...
ရေးတဲ့အချိန် 6:33 PM3comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
အမေရိကန်သမ္မတ အိုဘားမား ကို ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ပုံစံခိုင်းလိုရတဲ့ Android App လေးပါ
ကျနော်တို အမေရိကန်သမ္မတ အိုဘားမား ကို ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ပုံစံခိုင်းလိုရတဲ့ Android App လေးပါ။သီချင်းဆိုခိုင်းလိုရတယ် ကခိုင်းလိုရတယ် တော်တော်များများလုပ်ခိုင်းလိုရပါတယ်။
ရေးတဲ့အချိန် 6:19 PM No comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
android လုလင်မှာ မေးမြန်းဆွေးနွေးတောင်းဆိုနိုင်ရန် နေရာမှာ ကိုaungtoeတောင်းထားတဲ့ pes2012 data ဖိုင်ပါ
တင်ထားပေးပြီးပါပြီ ။ဆော့ချင်ရင်တော့ အရင်ဆုံး ဆော့ဝဲကို အင်စတော လုပ်လိုက်ပါ။အင်စတောလုပ်ပြီးရင် done ကိုပဲနိုပ်နော်။မဖွင့်နဲ့အုံး။
ပြီးရင် အခုပေးတဲ့ data ဖိုင်ကို SD Card>Android>Data> ဆိုတဲ့အထဲကို SD Data ကိုကူးထည့်လိုက်ပါ။
data ဖိုင်ထည့်ပြီးရင်တော့ ဆော့လို့ရပါပြီ။
လုလင်ပျိုတောင် အစက ဘော်လုံးကန်တယ်ဆိုတာ ဘာမှကိုမသိတာ။
ခုတော့ လုလင်ပျိုပျင်းတိုင်း ဘော်လုံးကန်တတ်နေပြီ။
ကဲ data ဖိုင်ကို ဒီနေရာမှာဒေါင်းလိုက်နော်
ဆိုက်က 104.69 MB ရှိပါတယ်။ဆော့ချင်ရင် စိတ်ရှည်ရှည်လေးနဲ့ဒေါင်းပေါ့။
ဘော်လုံးဝါသနာမပါတဲ့ လုလင်ပျိုတောင် ဒီလိုပဲ မြန်မာကွန်နက်ချင်နဲ့ စိတ်ရှည်ရှည်ထား ဒေါင်းခဲ့ရတာ။
apk ဖိုင်မရှိသေးတဲ့ သူတွေအတွက် အောက်က လင့်မှာဒေါင်းနော်
android လုလင် ကိုအဆင်အမြဲအားပေးနေကြတဲ့ သူငယ်ချင်းများကို
လုလင်ပျိုကို ခင်ပြီးသားသူများရော မခင်ရသေးသူများ
androidlulin@gmail.com ကို အပ်လို့ရပါတယ်။
အထူးပြောချင်တာက 2012.lulinpyo@gmail.com ကိုအပ်ပြီးသူများ
ရေးတဲ့အချိန် 6:03 PM No comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
နိုင်ငံ ၃၀ ကို gtalk ကနေ အခမဲ့ အကန့်အသတ်မရှိ ဆက်သွယ်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းလေးပါ…
4.Talkster မှ ပေးပို့တဲ့ confirmation ကို instructions တွေနဲ့ အတူ မြင်ရပါလိမ့်မယ်။ တဘက်မှ သင်ဆက်သွယ်ချင်တဲ့သူသုံးဖို့ local Talkster number တစ်ခုကို ရရှိလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့အနေနဲ့ အဲဒီနံပါတ်ကို ဖုန်းပြန်ခေါ်ဆိုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ မရှင်းတဲ့ သူတော်တော်များများရှိလို့ ထပ်ပြောပြပါမယ်။ အဲဒီ နံပါတ်က ကိုယ့် ဂျီတော့အိုင်ဒီကို အဲဒီသူက အဲဒီနိုင်ငံကနေ ဖုန်းပြန်ခေါ်လို့ ရအောင် စီစဉ်ထားတာပါ။ Call back system သုံးဘူးတဲ့သူဆို သိပါတယ်။
5. တကယ်လို့ mobile phone ကိုဆက်တာဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်, သူ့အနေနဲ့ SMS ကတစ်ဆင့် သင့်ကိုပြန်လည်ဆက်သွယ်ရန် Talkster call-in number တစ်ခုကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ မရသေးဘူးဆိုရင် Talkster number ကို IM ဒါမှမဟုတ် email နဲ့ပေးပို့နိုင်ပါတယ်။ Make calls from your Google Talk
no catches, no limits, and no conditions! လို့ သူတို့က ဆိုထားပါကြောင်း။စိတ်မကောင်းစွာဖြင့် ဒီlist ထဲမှာ စင်ကာပူနှင့် မြန်မာနိုင်ငံပါမလာပါဘူး …
ဒီ service လေးကို သုံးဖို့ တဘက်လူမှ Caller ID ကိုဖွင့်ထားပေးဖို့လိုပါမယ်။ ဒီနည်းလမ်းနဲ့ တဘက်ကလူကို အဲဒီ service မှ မှတ်မိသိရှိပြီး ဆက်သွယ်ပေးနေတာ ဖြစ်လို့ပါပဲ။ login တွေ password တွေမလိုတဲ့ လွယ်ကူစွာ ဆက်သွယ်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း သတင်းကောင်းပါးလိုက်ပါရစေ။
အသေးစိတ် သိလိုသေးရင်တော့ www.talkster.com ကို သွားရောက် ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ ZEALOT မှကူးယူပါတယ်
ရေးတဲ့အချိန် 4:04 PM No comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
Samsung Galaxy Gio GT-S5660 ကို CM9 အသုံးပြုပြီး ICS (သို့ မပာုတ်) ဂျယ်လီ ) သို့ မြင့်တင်နည်း
အရင် ဦးဆုံး ဒီကောင်တင်ရင် ဘာတွေ ရမယ် ဘာတွေလိုအပ်လဲတစ်ချက်လောက်ကြည့်
CyanogenMod settings (not all, it’s not fully merged by CyanogenMod team, not my fault)
Games – works as smoothly as on Gingerbread
Camera – only photos, without preview
Rooted Samsung Galaxy Gio GT-S5660 (See our guide on how to root the Samsung Galaxy Gio GT-S5660)
ကဲ အဲတာတွေဖတ်ပြီးတင်ချင်တယ်ဆိုရင် ICS တင်မလား ဂျယ်လီကြွေးမလား ဆုံးဖြတ်ပြီးအောက်ကနည်းအတိုင်းတင်ပါမယ်
ပထမဦးဆုံး rom ကိုတင်နိုင်ဖို့ အတွက် CWM တင်ရပါ့မယ်
CWM တင်မယ်ဆိုရင် root လုပ်ထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ် အရင်က CWM တင်ပြီးသားဆိုရင် တော့ ဒီအဆင့်ကိုကျော်သွားနိုင်ပါတယ်
တင်မယ်ဆိုရင်တော့ CWM ကို ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပါမယ်
(px-cwm-v2.zip, 7.13 MB) http://www.mediafire.com/?p7r2bcn9447bpc8
ဖုန်းရဲ့ ပါဝါကို အရင်ပိတ်ပါ recovery mode တင်ဖို့ အတွက် ကျွန်တော်ပြောတဲ့ ကီးလေးတွေကိုနှိပ်ပါမယ်
holding down the Home/OK (middle) button as you turn on the phone using the Power button. In recovery mode, use the Volume buttons for navigation and the Home/OK button for selecting ပါ
recover တက်လာပြီဆိုရင် တော့
Install zip from sdcard > Choose zip from sdcard, selectpx-cwm-v2.zip, and confirm that you want to flash the file. Reboot your phone afterwards အဲတိုင်းလုပ်ပေးလိုက်ပါ ok နော်
အဲတာတွေပြီးသွားပြီဆိုရင် မိမိဖုန်းမှာ CWM တက်ပါပြီ အဲတာ ဆိုရင်တော့ ROM တင်ဖို့ အပိုင်းကိုဆက်သွားကြတာပေါ့
ROM ကိုဒေါင်းပါ့မယ် အောက်ကလင့်ကနေဒေါင်းပါ
ဒါကတော့ ဂျယ်လီ Rom လင့်ပါ http://www.mediafire.com/?r1tw6cbcuby4c23
ဒါကတော့ ရေခဲ့ မုန့် rom လင့်ပါ http://www.mediafire.com/?7gh83kr7wvys072
ကြိုက်တဲ့ rom ကိုတင်နိုင်ပါတယ် နည်းကတော့အတူတူပါဘဲ
Rom ၇လာပြီဆိုရင် zip ကို sd ကတ်ထဲ ကိုထည့်ပေးပြီးဖုန်းကိုပိတ်လိုက် ပါ အပေါ်ကနည်းအတိုင်း သက်ဆိုင်ရှာ အလုပ်တွေကိုနှိပ်ပြီး CWM တက်လိုက်ပါ
CWM ထဲရောက်သွားရင် select Install zip from sdcard > Choose zip from sdcard, select the ROM package file, and confirm that you want to flash the file. It may take 5-10 minutes for the installation process to finish.
အားလုံးပြီးရင် main recovery menu ကိုပြန်ထွက်လိုက်ပါ
ပြီးရင် “Wipe data / factory reset“ လုပ်ပြီး “Go Back နဲ့ ထွက်လိုက်ပါ
“Reboot system now” လုပ်လိုက်ရင်ဖုန်းက ပြန်ပိတ်သွားပြီပြန်တက်လာပါလိမ်
အဲတာဆိုရင်တော့ သင် စိတ်ကြိုက်တင်ထားတဲ့ရေခဲမုန့် (သို့ မပာုတ် ) ဂျယ်လီလေးနဲ့ ပျော်ရွင်နိုင်ပါပြီဗျာ တိန် တိန်
ရေးတဲ့အချိန် 6:00 AM No comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
android ဖုန်းရဲ့ ဂျီမေးလ်ကနေ Attachment တွေ Downloadလုပ်နိုင်ဖို့Gmail Attachment Download.apk
လုလင်ပျို တို့ android ဖုန်းမှာ Attachmen ဖိုင်တွေ ဒေါင်းလို့မရဘူးနော်
အခုဆော့ဝဲလေး သုံးထားမယ်ဆိုရင် အဲဒီအခက်အခဲကိုဖြေရှင်းနိုင်ပါပြီ
file တွေကို ဒေါင်းလို့လည်းရသလို ပို့ချင်ရင်လည်းရပါတယ်
file explorer ကနေ၀င်ပြီး သီချင်းတွေ ဗီဒီယိုတွေကို tab တစ်ချက်နိုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်
action using ဘောက်ပေါ်လာပြီးတော့ Gmail Attachmen ဆိုတာကို ယူပြီး ပို့လို့ရပါတယ်။
ရေးတဲ့အချိန် 3:51 PM No comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
ဘာဆော့ဝဲမှ မလိုပဲ ဓာတ်ပုံတွေ ဗီဒီယိုတွေ hide ရအောင်
ဒီလိုပါ လုလင်ပျိုက ဓာတ်ပုံတွေ ဗီဒီယိုတွေ ဖွက်ချင်ရင် magic box ဆိုတာကိုသုံးတယ်။
magic box ကိုသုံးတဲ့အခါ ကိုယ်ဖွက်လိုက်တဲ့ ဓာတ်ပုံတွေ ဗီဒီယိုတွေ ကို file explorer မှာ သူကphoto hider ဆိုတဲ့ဖိုဒါ တစ်ခုဆောက်ပြီး သိမ်းထားတယ်ဗျ။
အဲဒီဖိုဒါ ကိုလုလင်ပျိုက ၀င်ကြည့်တော့ filename.mp4.menue ဆိုပြီး သိမ်းထားတာလေးကိုတွေ့တော့
နောက်ပိုင်း လုလင်ပျိုက ဓာတ်ပုံတွေ ဗီဒီယိုတွေ ဖွက်ချင်ရင် ဘာဆော့ဝဲမှသုံးမနေတော့ဘူး
ခုနကပြောတဲ့ လို filename.mp4 ရဲ့နောက်မှာ ပြောရမယ်ဆိုရင် file attention ဆိုတဲ့ mp4 ရဲ့ နောက်မှာ menue ကိုထည့်ပြီး rename ပြောင်းလိုက်တာပေါ့
ကဲ ဒီလောက်ဆို ♥♥ လုလင်ပျို ♥♥ လည်းရိပ်မိလောက်ပြီနော်
♥♥ လုလင်ပျို ♥♥ ဖုန်းက file explorer က file attention ပြောင်းလို့မရဘူးလို့ပြောမလို့လား
အဲအတွက်မပူပါနဲ့ဗျာ file attention ပြောင်းလို့ရတဲ့ file explorer ကို ခုဏတုန်းက ဒီနေရာမှာ တင်ပေးလိုက်ပါပြီ
ဒီပိုစ့်လေးကိုပြောချင်လို့ ခုဏကတင်တုန်းက file explorer ရဲ့အားသာချက်တစ်ခုကို ချန်ခဲ့တာလေ
ကဲ...စမ်းရင်းနဲ့ကလိနိုင်ကြပါစေနော် အဆင်ပြေကြလိမ့်မယ် လို့ယုံကြည်ပါတယ်
လုလင်ပျိုလည်း ကလိရင်း တွေ့မိတာလေးကိုပြောပြတာပါ
ရေးတဲ့အချိန် 3:01 PM No comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
အကြောင်းအရာ ဖုန်းများအတွက်လျှို့ဝှက်ချက်များ, သိမှတ်စရာ
Android Game Full Version Gpk(without SD Data) installလုပ်နည်းများအကြောင်း
ကျနော်Android OS Deviceတွေမှာ gameဖိုင်တွေကို Data မလိုတဲ.Full Version gpk ဖိုင်တွေ installလုပ်နည်းကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
gpk ဖိုင်တွေကို Android ဖုန်းတွေမှာ installလုပ်ရတာအင်မတန်လွယ်ကူပါတယ်။ gpkဖိုင်တွေက data မလိုတဲ. Full Versionဖိုင်တွေဖြစ်တော. လူကြိုက်များလာကြပါတယ်။ နည်းနှစ်နည်းကို ကျနော်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ တနည်းကတော. PCကနေ installလုပ်နည်းဖြစ်ပြီး တနည်းကတော.မိမိAndroid Deviceထဲကို gpk installerလေးသွင်းထားပြီး gpkဖိုင်တွေကို installလုပ်နည်းဖြစ်ပါတယ်။
Install From PC
ပထမဆုံးဒီ muzhiwan installerလေးကိုဒေါင်းလိုက်ပါ။
ပြီးလျှင် မိမိpcထဲကို installလုပ်လိုက်ပါ။ထို muzhiwan installeraလေးကို installလုပ်ပြီးပါက မိမိPC တွင် ရှိသော gpk,apkဖိုင်များအားလုံး ပုံများနဲ.တကွဖော်ပြပေးနိုင်ပါလိမ်.မယ်။
Muzhiwan installer အားဒေါင်းရန်
မိမိAndroid Device ကို usb cableဖြင်.usb debugging on ပြီး PCဖြင်.ချိတ်ဆက်လိုက်ပါ။ပြီးနောက်
မိမိ PCတွင်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲထားသော gpkဖိုင်များပေါ်သို. ကလစ်နှစ်ချက်ခေါက်လိုက်ပါ။
ကဲဒါဆိုရင်တော. မိမိဖုန်းထဲကို gpkဖိုင်လေး install လုပ်ပြီးပါပြီ။ gpk ဖိုင်များကို ဒေါင်းလုပ် လုပ်လိုပါက http://www.muzhiwan.com သို.၀င်ရောက်ဒေါင်းနိုင်ပါတယ်။
Install From Android Device
နောက်တနည်းကတော. PC ကနေမဟုတ်ပဲ မိမိဖုန်းထဲကို gpk installerလေးသွင်းထားပြီး gpk ဖိုင်တွေကို Installလုပ်နည်းပါပဲ။
ဒီ gpk installer လေးကို မိမိ SD Card ထဲကို installလုပ်ထားပါ။
ပြီးလျှင် မိမိ SD Cardထဲကို မိမိ installလုပ်လိုသော gpk ဖိုင်များသွင်းထားပါ။
ဒီလောက်ဆို gpk ဖိုင်တွေကို မိမိဖုန်းထဲကို install လုပ်နည်းလေးတွေသိသွားပြီထင်ပါတယ်။
Muzhiwan Market Application လေးကိုမိမိတို. Android Device ထဲကို install လုပ်နိုင်ပါသေးတယ်။ ဒီMarket လေးကနေ မိမိတို.ဒေါင်းချင်တဲ.ဂိမ်းတွေကို Full Versionဒေါင်းနိုင်ပါတယ်။
Ref: Android Free Apk Lover
ရေးတဲ့အချိန် 5:02 PM 1 comment: ရေးသားသူ Android လုလင်
အကြောင်းအရာ game ဆော့ဝဲ, ဆော့ဝဲ ။လုပ်ဆောင်ချက်
Huawei ဖုန်း 12 လုံးအတွက် firmware တင်ရင် updtae failed ဖြစ်မှာ မပူတော့နဲ့။ ဒီမှာလာပြီ Huawei Stock Recovery Installer
ကဲ ဒီမှာ မရေးဖြစ်တာလည်း ကြာသွားတော့ ဘာလေး လုပ်ပေးရင်ကောင်းမလဲ စဉ်းစားလိုက်တော့။ Firmware တင်ရင်
Update Failed ဖြစ်နေကြတာ တွေ့တော့ ဘယ်လို ဖြေရှင်းရမလဲ မသိတဲ့သူတွေအတွက်။ ကျွန်တော်
တတ်နိူင်သလောက်လေး လုပ်ပေးထားတာလေးပါ။ လိုချင်ရင်တော့ ယူကြဗျာ။ Huawei Stock Recovery Installer
လို့တော့ နာမည်ပေးထားတယ်။သူက ဘာတွေ လုပ်ပေးနိူင်မလဲ ဆိုတော့။ Official Firmware မှာ ပါတဲ့ boot.img နဲ့
recovery.img ကို သွင်းပေးမှာပါ။ ကျွန်တော် နားလည်ထားသလောက်ကတော့ Update Failed ဖြစ်ရတဲ့ ပြသနာက
တင်ထားတဲ့ Recovery ( CWM ပေါ့နော်) က firmware တင်တဲ့အခါမှာ Support မပေးနိူင်လို့ Update Failed
ဖြစ်တယ်လို့ သိထားပါတယ်။အဲဒါကြောင့် ဒါလေးကို ဖန်တီးဖြစ်သွားတာပါ။ နောက်တစ်ချက် ဆိုင်သမားတွေ
အကြိုက်တွေ့မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ Root ဖောက်ဖို့အတွက် CWM တင်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာ ပါဝါပိတ်ပြီး အားသွင်းတဲ့အခါ
Recovery Mode ထဲကို ရောက်သွားတဲ့ ပြသနာကလည်း ကင်းဝေးပါလိမ့်မယ်။ နောက်တစ်ချက် ဘုမသိ၊ဘမသိ
ကလိတတ်တဲ့ Customer တွေ Recovery mode ထဲရောက်ပြီး ဟိုဟာ လုပ်မိ၊ ဒီဟာ လုပ်မိလို့
ကိုယ်လုပ်ပေးထားတာလေးတွေ ပျက်ပြီး နောက်တစ်ခေါက် ပြန်လုပ်မပေးရတော့ဘူးပေါ့ဗျာ။ကဲ..ကဲ… ဟုတ်ရဲ့လားတော့
စမ်းကြည့်လိုက်ကြပါအုံး။ ဘာတွေအတွက် ပါမလဲတော့ သိချင်မှာပေါ့နော်။ ဒါတွေ ပါပါတယ်။
အောက်မှာ ယူဗျာ။ လိုင်းမကောင်းတော့ တင်လို့ ရတဲ့ နေရာကနေပဲ တင်ပေးလိုက်နိူင်တာကို ခွင့်လွတ်ကြနော်။
Download Link 1 : https://www.box.com/s/hokw38sewu1p0amqc8yh
Download Link2:https://www.sugarsync.com/pf/D0019460_943_25963148
Download Link3: https://www.dropbox.com/s/9vd0329dr2njuug/HuaweiStockRecoveryInstaller%203y%20H%40NL%40Y.exe
အားလုံးပဲ အဆင်ပြေကြမယ်လို့ ထင်ပါတယ်နော်။ အားပေးစကားလေးတော့ ပြောခဲ့ကြပါအုံးနော်။
ရေးတဲ့အချိန် 4:55 PM 1 comment: ရေးသားသူ Android လုလင်
ဒါလေးကတော့ RECOVERY MODE ၀င်ရခက်နေသောသူများ
USB DEBUGGING ON ထားရပါမယ်…အဲDRIVERရှိရမယ်Computerထဲမှာ…
Easy Reboot Recovery (Direct Download Link)
အဆင်မပြေပါက kzh702@gmail.com ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်…
ရေးတဲ့အချိန် 4:41 PM No comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
T8828,Y220t နဲ့အခြားသော Root မရသေးသောဖုန်းတွေအတွက်အဆင်ပြေမဲ့ App လေးတွေတင်ပေးလိုက်ပါတယ်…
T8828 ကို Root မလုပ်နိုင်သေးလို့ မြန်မာ App တွေထည့်ပြီးသုံးလို့ရအောင်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်.
ပါတဲ့ App တွေကိုအောက်မှာကြည့်လိုက်ပါ။
SM3 (MDY) 2012.apk
SM3 (YGN) 2012 .apk
T8828 Myanmar@www.myanmarmobilesoftwaredeveloper.com.rar (Mediafire)
T8828 Myanmar@www.myanmarmobilesoftwaredeveloper.com.rar (DropBox)
T8828 Myanmar@www.myanmarmobilesoftwaredeveloper.com.rar (Google Drive)
ရေးတဲ့အချိန် 4:40 PM No comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
Android အတွက် file Manager ဒီဇိုင်းအသစ်လေးပါ..
Explorer+ File Manager Pro Latest version:2.1.7
ICS အတွက် အထူးပြုလုပ်ထားတဲ့ Explorer လေးပါ တော်တော်လေး
အသုံးဝင်ပါတယ် နောက်ပြီး မလေးပါဘူး ..
- minor spelling corrections
Tags: file, folder, directory, search files, manage files, browse files, explore files, zip, unzip, rar, root explorer.
မော်ဒယ်နိမ့်သော Andriod ဖုန်းအတွက် Gtalk Voice and...
မေ့တတ်သူများအတွက် Stick 'N' Find bluetooth စတစ်ကာေ...
Contactတွေကို Widget အဖြစ်ထုတ်ထားပေးနိုင်တဲ့ App ပ...
နောက်ခံ run နေတဲ့အသံတွေ ဖမ်းလို့ရတဲ့ All That Reco...
သင့်ဖုန်းကို SPY CAMERA အဖြစ်ပြောင်းပေးမယ့် Hidden...
Andriod ဖုန်းများကို computer မှ လုံးဝ ထိန်းချုပ်န...
အမေရိကန်သမ္မတ အိုဘားမား ကို ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ပုံစံခိုင...
android လုလင်မှာ မေးမြန်းဆွေးနွေးတောင်းဆိုနိုင်ရန်...
Samsung Galaxy Gio GT-S5660 ကို CM9 အသုံးပြုပြီး I...
android ဖုန်းရဲ့ ဂျီမေးလ်ကနေ Attachment တွေ Downlo...
ဘာဆော့ဝဲမှ မလိုပဲ ဓာတ်ပုံတွေ ဗီဒီယိုတွေ hide ရအောင...
Android Game Full Version Gpk(without SD Data) ins...
Huawei ဖုန်း 12 လုံးအတွက် firmware တင်ရင် updtae f...
T8828,Y220t နဲ့အခြားသော Root မရသေးသောဖုန်းတွေအတွက်...
Valentine's Day အတွက် theme for Android
Valatines Day Wall Paper (For Android)
Valentine Day အကြိုချစ်သူတို့အတွက် (Angela’s Valen...
Valentine Fruit Ninja (Android)
Symbols keyboard & text art.apk
Background Video Player.apk ယနေ့ 11.02.2013 update...
app center ယနေ့11.02.2013 upldate version လေးပါ
ဘယ် Huawei မဆို အမြစ်မတူးဘဲ မြန်မာဖောင့်လေးထည့်ကြည...
Huawei နောက်ဆုံးထွက် Model တွေရဲ့ Firmware တွေကို ...
ကိုယ်ကြိုက်ရာ app shake လုပ်ပြီးခေါ်မယ်
android ဖုန်းဆိုင်ရာ အမေးနဲ့အဖြေစုံ(11)
ဗယ်လင်တိုင်းနေ.မှာ ကဲမဲ. ညီမများ၊ မမများ အတွက်ပါ(s...
Y220T Root ရပါပြီ...
မလေးရှားမှာ ဖုန်းနှင့် အင်တာနက် free သုံးချင်လိုသူ...
Android ဖုန်းပေါ်မှာ လက်နဲ့ရောင်စုံအရုပ်လေးတွေ ရေးန...
AmazingText Plus - Text Widget v1.1 APK
android ဖုန်းဆိုင်ရာ အမေးနဲ့အဖြေစုံ(10)
android ဖုန်းဆိုင်ရာ အမေးနဲ့အဖြေစုံ(9)
android ဖုန်းဆိုင်ရာ အမေးနဲ့အဖြေစုံ(8)
android ဖုန်းဆိုင်ရာ အမေးနဲ့အဖြေစုံ(7)
android ဖုန်းဆိုင်ရာ အမေးနဲ့အဖြေစုံ(6)
android ဖုန်းဆိုင်ရာ အမေးနဲ့အဖြေစုံ(5)
android ဖုန်းဆိုင်ရာ အမေးနဲ့အဖြေစုံ(4)
android ဖုန်းဆိုင်ရာ အမေးနဲ့အဖြေစုံ(3)
Call Log Cleaner Free 1.3: Free Download
Android ဖုန်းထဲသို့ ကွန်ပျူတာမှတစ်ဆင့် ဖုန်းဆော့ဝဲ...
ADB Driver အလွယ်သွင်းနည်း…
android ဖုန်းဆိုင်ရာ အမေးနဲ့အဖြေစုံ(1)
android ဖုန်းဆိုင်ရာ အမေးနဲ့အဖြေစုံ(2)
Android ဖုန်း Screen ဒီဇိုင်းကို အလန်းစားဖြစ်သွားေ...
Published On: Mon, Feb 27th, 2012 Android OS appli...